Cisco CCNP da cusub maxaa laga badalay? - Hurbad
Cisco CCNP da cusub maxaa laga badalay?
Cisco waxa eey badashay Certification tracks kii lagu yaqaanay, oo kuwana waa laga bixiyay kuwana waa lagu soodaray.
Cisco certification ka eey wax badan kabadashay waxaa kamid ah CCNP R&S oo eey magaca kabadaleen, una bixiyeen CCNP Enterprise.
CCNP Enterprise Certification track-gu waxa uu kakooban yahay hal Core ah oo loo yaqaano ENCOR iyo lix Concentration exams ah oo lagaaga baahan yahay in aad hal kamid ah qaadato.
Dooro midkaid ah
Cisco CCNP Enterprise Core (350-401 ENCOR) Objective ka waxaa kamid ah
Layer 3 infrastructure technologies
Cisco CCNP Enterprise Core (350-401 ENCOR) waxaa koorso aad u balaaran laguna baranayo cilmi baaxad wayn, sidaa darteed ayaan waxaan ugu dadaalnay in aan koorsadaan Cisco CCNP Enterprise Core (350-401 ENCOR), u diyaarino si ad u hormarsan oo loogu tala galay in ardayga baranaya CCNP in oow aad u fahmo Advanced Networking Concepts, implement SD-WAN, SD-Access iyo Quality of Service solutions, iyo Network programmability.
Cisco CCNP Enterprise Core (350-401 ENCOR),
koosadaan markii aad dhameeyso, maahan in aad CCNP Enterprise aad dhameeysay, ee waxaa wali kuu dhiman in aad doorato Concentration Exam oo aad ku noqoneeysid qof ku taqasusay Network Enterprise qeyb kamid ah.
badanaa dadku markii eey dhameeyaan ENCOR course, waxa eey ku xijiyaan Cisco Enterprise Advanced Routing and Services (300-410 ENARSI), oona kuugu diyaar ah Hurbad Cisco Page.